के कट्रिनाको बारे जान्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ उनको लाईफ स्टाईल ! « रंग खबर
के कट्रिनाको बारे जान्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ उनको लाईफ स्टाईल !
रंगखबर, काठमाडौँ- बलिउडमा स्थापित हुन् जो कोहिलाई पनि त्यति सजिलो छैन्। हिन्दी चलचित्रमा डेढ दशक भन्दा लामो समय देखि आफ्नो राम्रै पकड बनाई रहेकी हिरोइन हुन् कट्रिना।
तर अन्य हिरोइनहरुले झैँ बलिउडमा मोडल हुँदै सुपरहिट नायीकाको स्थान ओगट्नको लागी क्याट्रीनाले पनि धेरै पापड बेल्नु पर्यो।
अहिले सके सम्म चलचित्रहरुमा बिकिनी अथवा छोटो लुगा लगाउन नमान्ने र सकभर किसिङ्ग सीन नदिने क्याट्रीनाले बलिउडमा पाइला राख्नकै लागी कुनै बेला ‘बुम’ जस्तो चलचित्र समेत गरेकी थिइन्।
तर जब उनले सलमान खानको साथ पाइन् तब देखि उनले आफ्नो करिअरलाई पछाडी फर्केर हेर्नु परेन। बलिउडकी टप एक्ट्रेसस को सूचीमा उनको पकड लामो समय देखिनै छ।उनले मेने प्यार क्यु किया,नमस्ते लण्डन तथा एक था टाईगर जस्ता धेरै सफल चलचित्रहरुमा काम गरिसकेकी छन्, त्यहि अनुसार उनले पारिश्रमिक समेत राम्रै लिने गर्छिन्।
उनको जीवन शैली कस्तो छ,धेरैलाई चासोको बिषय बन्न सक्छ। आज हामीले उनको बायोग्राफी तथा जीवन शैली कस्तो छ,भन्ने बारे केहि रोचक सामग्री तयार गरेका छौँ। जसबारे तल चर्चा गरिएको छ :
उनको पुरा नाम कट्रिना टार्क्वट कैफ हो। क्याट्रीनाको उचाई ५ फिट ९ इन्च छ,बडी साइज ३४ -२६-३४ छ। उनको राष्ट्रियता भारतीय र ब्रिटिश हो भने,उनि इसाई धर्म मान्छिन् ।
अहिले कट्रिना ३५ बर्षकी भइन् ,उनको जन्म सन् १९८३ मा हङकंगमा भएको थियो। परिवारमा एक दाजु,तीन दिदी र तीन बहिनी र आमा सहित जम्मा नौ जना रहेका छन्।
क्याकट्रिनाको प्रेम सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा उनको सम्बन्ध सलमान खान सँग रहेको थियो,सलमान सँगको ब्रेकअप पछी उनि रणबीर सँग नजिकिएकी थिईन। रणबीर र क्याट्रीना लामो समय सम्म लिभिङ रिलेशनमा बसे पछी छुट्टीएका थिए।
अहिले उनले कसलाई डेट गरिरहेकी छिन् भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन्।
कट्रिनाले खासै धेरै पढेकी भने छैनन्,उनले आमा तथा ट्युटरसँग आफ्नै घरमा केहि आधारभुत कोर्सहरु अध्ययन गरिन्।
उनको बलिउड यात्रा सन् २००३ मा रिलिज भएको बूम नामक चल चित्रबाट सुरु भयो । अहिले सम्म उनले जम्मा ३८ वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छन्।
कट्रिनाको जम्मा सम्पत्ती १० मिलियन डलर छ,एउटा चलचित्र वापत उनले ७ देखि १० करोड सम्म पारिश्रमिक लिने गर्छिन्।
उनको मुम्बईमा दुइवटा घरहरु छन्। साथै उनि कारको पनि सौखिन छिन्, उनिसँग अडी क्यु ७ (७० लाख बराबरको ), अडी क्यु ३( ३४ लाख बराबरको ),मर्सिडिज एमएल ३५०(६४ लाख बराबरको ) कार कलेक्सन छ।
प्राय : बलिउडका सबै मेगास्टार सँग काम गरिसकेकी उनलाई बलिउडमा नायक ऋतिक रोशन मनपर्छ भने नायिकाहरुमा काजोल र माधुरी उनका फेवरेट हुन्। खाली समयमा उनि घुम्न र पेन्टीङ गर्न मन पराउँछिन् । स्पेन,दुबाई लण्डन तथा इटाली जस्ता ठाउँहरु उनका मन पर्ने ठाउँहरु हुन्।
कुनै बेला हिन्दि बोल्न नजानेका कारण कट्रिनाको धेरै आलोचना हुने गर्थ्यो। उनका बाबु काश्मिरी थिए र आमा ब्रिटिश,त्यसैले उनि आधा इन्डियन र आधा ब्रिटिश बनिन्।
कट्रिनाकी आमा धेरै देशहरुमा बसाइ सरेका कारण उनि कहिले पनि स्कुल जाने अवसर पाइनन्। तर पनि १४ बर्षको उमेरमा नै क्याटरिनाले ब्युटी कन्टेस्ट जितेकी थिइन्।
२००८,२००९ र २०१० मा गुगलमा सबै भन्दा खोज गरिएकी भारतीय नायिका बनेकी थिइन्।
आफ्नो करिअरमा अहिले सम्म ३५ भन्दा धेरै अवार्डहरु प्राप्त गरिसकेकी,उनि अझै पनि ब्रिटिश नागरिकको रुपमा वर्क भिजामा इन्डियामा बसेकी छन् । बलिउडका डाइरेक्टर कबिर खान उनको सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन्।
सोशल मिडियामा सँधै सक्रिय रहने क्याटरिनाको फेसबुकमा १३.४ मिलियन भन्दा धेरै फ्यानहरु छन् भने इन्स्टाग्राममा पनि १२.२ मिलियन फ्यानहरु छन्। (एजेन्सी)